Ny andriamanibavy sy ny toetran'i Chaama Tiamat - iza io?
Ao amin'ny angano sumeriana-babylonianina, noheverina ho rano sira ny andriamanibavy Tiamat. Izy, miaraka amin'i Abzu, ilay andriamanitry ny rano madio, dia niteraka andriamanibavy hafa. Ny loha laharana dia toy ny liona manana elatra misy rambony. Nosoratana tamin'ny vavony, ny tratra, ny tendany, ny loha, ny maso, ny orona ary ny molotra. Noforonin'i Mardoka avy amin'io vatana io ny tany sy ny lanitra.
Iza moa i Tiamat?
Nandritra ny fotoana lava, tany Mezopotamia, raha tsy misy endrika sy fitsipika, dia nisy zavona roa niseho. Ny voalohany - Apsu, lehilahy, naka rano rano ho an'ny boards. Ny faharoa dia ilay vehivavy, mitondra ny rano mangatsiaka, antsoina hoe Tiamat, tompon-dakan'ny korontana. Araka ny fanazavana, i Tiamat dia, araka ny angano, dia dragona miaraka amin'ny lion'ny liona, valan-drongony, batatra elatra, paiso sakaiza, voromahery, vatan'ny python. Izany dia mampiseho ny razamben'ny Babylonianina fahiny.
Tiamat - Mythology
Hatramin'ny fahiny, ny olona dia mahafantatra fa misy fiantraikany amin'ny ranomasina ny volana. Tiamat-demon dia andriamanibavy Moon, nolevonin'ny mpivavaka masoandro ny fivavahany. Nampiasa ny kalandrie noforonin'i Madruk ny mponin'i Mezopotamia. Tiamat - andriamanibavy ary nijanona, fa tsy ambony, na dia mbola nanao sorona olombelona aza izy.
Rehefa nandeha ny fotoana, dia nosoloin'ny patriarika ny matriarchy, dia ilaina ny nanova ireo andriamanitra. Sary nalaina ny vehivavy dia lasa demonia. Ankehitriny dia demony i Tiamat, ny fiovan'ny ratsy amin'ny endriky ny bibilava. Ary lasa Bel-Marduk ilay andriamanitra vaovao. Nariany ilay progenitor, niampanga azy ny fikasana eschatological. Saingy noho izany dia tsy nifarana ny fiampangan'ny andriamanibavy. Natsangany tamin'ny maty izy, ka maty teo an-tanan'ny Arikanjely Michael.
Andriamanitra ny renirano sy renirano renirano Apsku sy ny andriamanibavin'ny korontana Tiamat dia niara-nanangana andriamanitra hafa sy an'izao tontolo izao, saingy tsy nankatò ny ankizy, izay nanapahan'i Apsu ny hamono azy ireo. Nianatra momba ilay fikasana ratsy izy ireo ary mba ho voavonjy, dia nanaiky ny andriamanitra Eyja momba ny famonoana ny rainy. Tiamat, renin'ny haizina, dia tsy te hamono ny ankizy, fa rehefa nifampiraharaha tamin'i Apsu malalaka i Eyya dia nanomboka niady tamin'izy ireo ihany koa.
Tsy ela dia nananan'i Kingu vaovao i Tiamat. Niaraka taminy, ilay andriamanibavy dia teraka monopole. Ireo andriamanitra kely, ireo zanaky ny razamben'izy ireo, dia tsy sahy niditra hiady taminy, fa indray andro, ny zanak'i Eja, andriamanitra Mardoka dia nanapa-kevitra ny hanohitra ilay dragona. Ny ankizy dia nampanantena fa raha nandresy izy dia ho lasa andriamanitry ny andriamanitra. Nanaiky izy. Nanao peta-drindrina izy, naka ny Mpanjaka sy ny saribakoly hafa avy aminy, nanafay azy ireo tamin'ny gadra ary namela azy ireo tao amin'ny Underworld. Taorian'izany, raha niady tamin'i Tiamat izy dia namono azy, namorona ny antsasaky ny vatany ny lanitra, ny iray hafa - ny tany.
Tiamat sy Abzu
Tiamat no andriamanitry ny korontana, i Abzu vadiny no andriamanitry ny rano ambanin'ny tany. Ny fanambadian'izy ireo dia niseho tamin'ny fotoana izay nanombohan'ny rano avy amin'ny tany lalina. Namono an'i Abzu i Noah (Enki), avy eo namorona tanimanga avy tamin'ny tanimanga. Midika izany fa miverina any amin'ny lavaka ilay rano, ary mihodina ny tany. Averina indray, misy olona miseho eo ambony. Taorian'ny nahafatesan'i Abzu, dia i Tiamat no nahatonga an'i Kingu. Izy no lasa mpitarika eo amin'ny ady amin'ny taranaka tanora. Avy eo izy dia naka ny toeran'ny vadin'i Tiamat faharoa.
Tiamat sy Marduk
Ny fahendrena sy ny herim-po nasehon'i Marduk dia voalaza amin'ny tantara sy angano maro. Nanao lelafo nirehitra izy, ary nisy maso efatra sy sofina efatra. Tao anatin'ny fotoana nanjakany, nisy rivo-doza sy tadio. Ny mpisorona babylonianina dia nihevitra azy ho mpitondra ny andriamanitra. Tao anatin 'ny voninahiny dia nisy fikorontanam-be. Izy, mahery sy mahery fo, dia nivoaka mba hiady amin'ireo andriamanitra fahiny. Tezitra tamin'ny heriny izy ireo saingy izy irery no afaka nandresy azy ireo ary namorona ny baikony manokana teto amin'izao tontolo izao. I Marduk no rava ny kibon'i Tiamat, izay niteraka azy.
Nanangona ny biby goavam-be rehetra izy, nametraka ny vady malalan'i Kingu, ary niomana hiady. Noho ny fangatahan'ny andriamanitry ny tanora dia nandeha niady i Marduk. Izy dia nitondra akanjom-bala, fandrika ary tsipìka. Niaraka tamin'ny rivotra sy ny oram-baratra dia nandeha nivory niaraka tamin'i Tiamat sy ny mpilalao azy. Ady mafy ny ady. Ilay andriamanibavy dia nanandrana namotika ilay fahavalo, nandroaka azy, saingy nanjary hafahafa kokoa. Nanipy ny harato, namitaka azy i Tiamat ary nampalemy azy. Avy eo dia nitifitra ny zana-tsipìka izy. Ka dia niaraka tamin'i Tiamat. Taorian'izany, dia mora tamin 'ny biby goavam-be izy. Nisy naka an-tranomaizina, ny hafa nandositra. Marduk no nandresy tanteraka.
Ahoana no hahatonga ny mpamosavy amin'ny tena fiainana?
Ahoana ny fahitana nofy ara-paminaniana?
Fivarotana any Düsseldorf
Ladies Watch Watch - Fashion 2015
Tortlets misy atody
Fanesorana ny patriarika
Dokam-barotra amin'ny fisaraham-panambadiana eo anatrehan'ny ankizy madinika
Sary amin'ny ririnina ho an'ny zazavavy iray
Inona no mahasoa amin'ny kiririovana ho an'ny vehivavy bevohoka?
Mangidy mafy tsy misy tazo
Jennifer Lawrence dia namelabelatra tamin'ilay fandaharana Jimmy Fallon
Ny fomba hampianarana baiko ny alika
Makia eo ambany akanjo mavo
Beyonce dia nampiseho baomba vaventy roa volana taorian'ny nahaterahany